Wararka - Geedaha Oo Ka Soo Saara Qeybta Suuqa Oo Faahfaahsan 2025
Qeybta Suuqa Kala Soo Baxa Dhirta Oo Faahfaahsan 2025
“Dulmarka Dhirta Guud ee Suuqa 2021 - 2025
Tani waxay keentay dhowr isbeddel Warbixintan waxay sidoo kale dabooleysaa saameynta COVID-19 ee suuqa adduunka.
Tikniyoolajiyadda sii kordheysa ee Suuqa Dhirta laga soosaaray Dhirta ayaa sidoo kale lagu muujiyay warbixintan cilmi baarista. Soosaarida dhirta waxay ku saleysan tahay geedo sida walxo ceeriin ah iyadoo la raacayo baahida dhulka la soo saaray, iyada oo loo marayo soo saarista jirka iyo kiimikada iyo habka kala soocidda, oo loogu talagalay helitaanka iyo ku-uruurinta geedaha mid ama noocyo kala duwan oo firfircoon, iyada oo aan la beddelin qaab-dhismeedkeeda firfircoon iyo sameynta alaabooyin.
Horumarka, yamaarugga caanaha iyo sawirada Palmetto waxay ku jireen liiska dhirta caanka ah iyo daaweynta sannado badan. Sanadihii la soo dhaafay, horumarka degdegga ah ayaa lagu arkay suuqyada timirta iyo yamaarugga caanaha, halka mustaqbalka. Waxaan soo jeedinaynaa in kororka labadan suuq ay weli sii socon doonaan, laakiin leh xawaare aad u yar. Soosaarka xabadka farasku si siman ayuu u kordhaa sanadaha soo socda, taas oo ay ugu wacan tahay feejignaanta dadka ee ku yar shaqaynta xabadka faraska. Isbarbardhig, pygeum ayaa ka caan badan seddexda shey ee kor ku xusan. Si kastaba ha noqotee, dhifka ilaha alaabta ceeriin ayaa caqabad ku ah horumarka soosaarida pygeum. Asal ahaan, horumarka pygeum wuxuu la tartamayaa yamaarug caan ah wuxuuna arkay palmetto sanadahan.
Suuqa, Yurub waa suuqa ugu weyn ee dhirta laga soo saaro, waxaa ku soo xiga Mareykanka. Sannad kasta, geedo fara badan iyo geedo ka soo baxa ayaa loo soo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka, si loo qanciyo baahida sii kordheysa ee kaabista dhirta iyo daaweynta meelahaas. Maaddaama pygeum laga soo saaro Afrika oo keliya, Yurub iyo Shiinaha waxay soo saaraan pygeum-ka laga soo dhoofiyo Afrika, waxayna siisaa walxaha loo yaqaan 'pygeum extracts' suuqa Euorpe iyo Mareykanka; Miinshaar-macaan ayaa inta badan laga beeraa Mareykanka, sidoo kale inta badan waxaa lagu cunaa Mareykanka; Yurub waa suuqa ugu weyn ee laga soosaaray yamaaruggii yamaarugga, oo ay si dhow ula socdaan Mareykanka; Sidoo kale, Yurub ayaa ah saldhiga ugu weyn ee wax soosaarka iyo suuqyada faraska laabta.
Wax soosaarka, suuqa laga soo saaro dhirta ayaa xoogaa isku urursan: Martin Bauer waa hogaamiyaha ugu sarreeya suuqyada dhirta adduunka laga soo saaro, oo leh boqollaal alaabood oo lagu qanciyo suuqa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Ciyaartoyda kale ee hormuudka u ah sida Indena, Euromed iyo Naturex ayaa sidoo kale qayb muhiim ah ka qaadanaya arimahan. Waxaa xusid mudan in soo saaraha Shiinaha uu kaalin muhiim ah ka qaadanayo suuqa dhirta laga soo saaro dhirta, u soo dhoofinta alaabada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Ciyaartoyda Shiinaha hogaaminaya waa TY Pharmaceutical, Natural Field iyo Xi'an Herbking.
Ganacsi ahaan, ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta ee dhirta laga soo saaray dhirta ayaa ah mid joogto ah. Maaddaama soo saaraha Yurub ay soo saaraan qayb weyn oo ka mid ah wax soo saarka adduunka, shirkadaha Yurub waxay u dhoofiyaan wax soo saar aad u tiro badan Waqooyiga Ameerika iyo Australia. Shiinaha sidoo kale waa dhoofiyaha muhiimka ah ee dhirta dhirta, oo ujeedkiisu yahay suuqa Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay in warshadani ay hadda ku dhowdahay inay qaan gaadho, iyo heerka kordhinta isticmaalka ayaa muujin doonta qallooc hoos u dhac ah. Qiimaha badeecada, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah mustaqbalka Ka sokow, farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan ayaa si tartiib tartiib ah u yaraanaya. Sidoo kale, waxaa jiri doona isbedbeddel ku yimaadda wadarta guud.
Waxyaabaha kor u qaadaya koritaanka suuqa, iyo bixinta riix wanaagsan si ay ugu koraan suuqa adduunka ayaa si faahfaahsan loogu sharxay.
Soosaarida xididka Ginseng, Soosaarida Tribulus Terrestris, Soosaarida Shaaha Oolong, Soosaarida Thymus Vulgaris, Marigold Extract Lutein, Bromelain,